Global Freigance Asia Gig - အများပိုင်သတင်း။ အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
အမျိုးအစား: ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Gig Freelancing အာရှ
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Gig Freelancing အာရှ
ဧပြီလ 21, 2021 ဧပြီလ 21, 2021 Sylvia ဂျိမ်းစ်	မှတ်ချက် Leave
Sarees ခြောအိန္ဒိယဖြစ်ကြသည်။ သူတို့သည်အိန္ဒိယရိုးရာနှင့်အမွေအနှစ်များ၏အရေးပါသောအမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြားလူမျိုးစုများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများမှလူများသည် saree အားအိန္ဒိယအတွေ့အကြုံ၏အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်လိမ့်မည်။
ကျယ်ပြန့်ပြီးရှုပ်ထွေးသော sarees လောကတွင်၊ Banarasi ပိုး saree အထူးအသိအမှတ်ပြုမှုလိုအပ်သည်။ Banarasi sarees များသည်ဘင်္ဂါလီမင်္ဂလာဆောင်များတွင်ရိုးရာသတို့သမီးဝတ်စုံဝတ်မှအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုအိန္ဒိယဖက်ရှင်အသွင်သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
Shovon Jaman အသက်အငယ်ဆုံးဂီတအနုပညာရှင်နှင့်ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး
ဧပြီလ 20, 2021 ဧပြီလ 20, 2021 Shovon Jaman	မှတ်ချက် Leave
ကျွမ်းကျင်သော Shovon Jaman သည်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဂီတအနုပညာရှင်နှင့်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်၊ Gamer နှင့် Instagram Personality ဖြစ်သည်။ Shovon Jaman ကိုAprilပြီ ၂၄ ရက်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသည်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဒါကာဌာနခွဲရှိ Gazipur တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ Shovon Jaman ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီကြီးများမှ Verified Artist အဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်။ Shovon Jaman ၏သီချင်းများကိုယခုပလက်ဖောင်းအားလုံးတွင်ရရှိနိုင်သည်။ သီချင်းချစ်သူများသည်သူတို့လိုချင်ပါကသီချင်းများကိုနားထောင်နိုင်သည်။ လူကြိုက်များသောဂီတဒါရိုက်တာများ၊ အနုပညာရှင်များကသူ့ကို Twitter, Facebook နှင့် Instagram တို့တွင်အဆင့်အတန်းများဖြင့်လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။
Sulaiman Ahmed Sami ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် - အနုပညာရှင်အောင်မြင်သောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်
ဧပြီလ 19, 2021 ဧပြီလ 19, 2021 Sulaiman Ahmed Sami အဘိဓါန်	မှတ်ချက် Leave
၂၀၀၁ ခုနှစ်မေလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် Sylhet ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ Sulaiman Ahmed sami ငယ်စဉ်ကလေးဘဝမှအသစ်သောအရာများကိုကြိုးစားခြင်းကိုအလွန်စိတ် ၀ င်စားခဲ့သည်။ သူကအမြဲအသစ်သောအရာနှင့်အတူစမ်းသပ်ချင်တယ်။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်းကသူသည်သေနတ်မပါသောအတွေးအခေါ်များကိုတီထွင်ခဲ့သောကြောင့်သူသည်လူသိများသည်။ သူ၏စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံမှာအလွန်ထူးခြားသည်။ ၎င်းသည် ၁၉ နှစ်အရွယ်တွင်အောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့သည်။ သူသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းကိုတော်လှန်သည့်လုပ်ငန်းရှင်၊ အနုပညာရှင်နှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်
ဧပြီလ 19, 2021 ဧပြီလ 19, 2021 Sahil Sachdeva	မှတ်ချက် Leave
နွေရာသီအလှည့်ကျ တောင်စခန်းသို့မဟုတ်ကမ်းခြေများသို့လှည့်လည်ရန်စီစဉ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးသောအချိန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အားလပ်ရက်အားစီစဉ်ခြင်းသည်သေးငယ်သည်ဖြစ်စေရှည်လျားသည့်အားလပ်ရက်ဖြစ်စေ၊
ဒီနေ့ခေတ်မှာခရီးသွားတွေဟာအားလပ်ရက်စီစဉ်တာကိုစိတ်မပူပါနဲ့။ များစွာသောအွန်လိုင်းဟိုတယ်ဘွတ်ကင်ပလက်ဖောင်းရှိပါတယ်ကတည်းက။ သူတို့ကခရီးစဉ်စီစဉ်ခြင်းမှနောက်ဆုံးကွပ်မျက်ခြင်းအထိစာရွက်စာတမ်းအားလုံးကိုလုပ်သည် ခရီးသွား၊ ရှုခင်း၊ စွန့်စားမှု၊ အစားအစာစသည်ဖြင့်အားလုံးပါဝင်သည်။
ဧပြီလ 7, 2021 ဧပြီလ 7, 2021 Saahil R ကို	မှတ်ချက် Leave
ဒေလီ, အိပ်မက်နှင့်အဆုံးမဲ့အခွင့်အလမ်းများ၏အရာများစွာကိုလူသိများကြသည်။ မဂိုခေတ်၏သမိုင်း ၀ င်နေရာများ မှနေ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ဟူသောအချက်များအထိ မှစ၍ ဒေလီ၏လမ်းကြားများ၌လှည့်လည်ခြင်းအားဖြင့်အမှန်တကယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဒေလီသည်တိုင်းပြည်၏မြို့တော်ဖြစ်သောကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤအခွင့်အလမ်းများနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ရုန်းကန်မှုများကြားမှပင်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ဘဏ္crisisာရေးအကျပ်အတည်းကြားတွင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။
Alopecia Areata ဆိုတာဘာလဲ။
မတ်လ 31, 2021 မတ်လ 29, 2021 Sylvia ဂျိမ်းစ်	မှတ်ချက် Leave
သင်သည်ဤဝေါဟာရကိုအသစ်အဆန်းလုပ်ပြီး၎င်းသည်မည်သည့်အတိအကျဖြစ်ကြောင်းမသိပါသလော Alopecia areata ဆိုသည်မှာ ဦး ရေပြားပေါ်ရှိသေးငယ်သည့်ပတ်ပတ်လည်တွင်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အပြင်ခေါင်းလျှော်ရည်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့် autoimmune အရေပြားရောဂါကိုရည်ညွှန်းသည်။
၎င်းသည်အမာရွတ်မရှိသောအရေပြားရောဂါအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် ဦး ရေပြားပေါ်တွင်မည်သည့်အမာရွတ်ကိုမျှရှာမတွေ့ပါ။ အချို့သောသူများအတွက်အချိန်ကာလတစ်ခုအရဆံပင်အသစ်ပေါက်သည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်ဤရောဂါမှတစ်နှစ်ခန့်ကြာပြီးတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကွဲပြားနိုင်သည်။
MD Abu Siyam သည် CyberSecurity အကြောင်းဆွေးနွေးထားသည်
မတ်လ 30, 2021 မတ်လ 29, 2021 MD အဘူ Siyam	မှတ်ချက် Leave
MD Abu Siyam သည် Blogger၊ Content Creator နှင့် CyberSecurity ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။ သူသည်အများအားဖြင့် TechneSiyam အဖြစ်လူသိများသည် သူ့ဘလော့ဂ်အတွက် သူသည်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးနှင့်အခြားနည်းပညာများအကြောင်းနောက်ဆုံးသတင်းများ၊ လှည့်ကွက်များနှင့်အကြံပေးချက်များကိုဖော်ပြသည်။ ဒီကနေ့မှာသူနဲ့သူ့ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာဗဟုသုတနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုသူပြောပြခဲ့သည်။
Ravi Kumar Thakur, လူငယ်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်နှင့်အားလုံး rounder ဗိုလ်ကြီး
မတ်လ 18, 2021 မတ်လ 18, 2021 Keshav ထာ	မှတ်ချက် Leave
Ravi Kumar Thakur သည် Darbhanga Bihar မှစွန့် ဦး တီထွင်လူငယ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည်ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် Kaamchaalu global ၏မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာကို ဦး ဆောင်သူဖြစ်သည်။ Ravi 27 ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်th Bihar သူ့ဟာသူအတွက် 2001 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ။ သူသည် MahindrasDarbhanga တွင်ပညာသင်ခဲ့ပြီး Lalit Narayan Mithila တက္ကသိုလ်မှပညာသင်ကြားခဲ့ပြီးယခုအခါ Kaamchalu Global ကိုထိရောက်သောဒါရိုက်တာအဖြစ် ဦး ဆောင်သည်။
မတ်လ 16, 2021 မတ်လ 16, 2021 Ipshita Shekhawat	မှတ်ချက် Leave
အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များနှင့်လက်လှမ်းမီရန်အတွက်ရိုးရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းစနစ်များကိုသာမှီခိုအားထားသည့်ကုမ္ပဏီများသည်ပျောက်ကွယ်သွားပြီ ဒစ်ဂျစ်တယ်နေရာသည်အရူးကဲ့သို့ပြောင်းလဲနေသောကြောင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းစနစ်များသည်လည်းပြောင်းလဲသွားသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုသင်ရွေးချယ်ခြင်းမပြုပါကသင်၏စီးပွားရေးတွင်မည်သည့်အခါမျှအောင်မြင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒီဂျစ်တယ်တည်ရှိမှုသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအားမည်သို့ပင်ဂရုစိုက်စေသင့်သည့်အရေးကြီးဆုံးအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
13 သင်၏စားသောက်ဆိုင်အတွက် ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်
မတ်လ 15, 2021 မတ်လ 15, 2021 Karen Sanders	မှတ်ချက် Leave
သင်အကြိုက်ဆုံးကော်ဖီကိုသောက်ရန်တိုက်တွန်းမှုနှင့်အတူဆောင်းရာသီအအေး။ ထိုနံနက်ခင်း pancakes နှင့်ယိုရည်ရည်တို့သည်သင်၏နှလုံးကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေသည်မဟုတ်ပါ။
ဒါပေမယ့်ဒီမှာတစ်ခုတည်းသောပြproblemနာကသင်မှာချင်တဲ့စားသောက်ဆိုင်မှာ ၀ ဘ်ဆိုဒ်မရှိပါ၊ အခန်းကဏ္switchကိုပြောင်းကြပါစို့။ သင်ဟာအဲဒီစားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီးသင်ရောင်းနေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းအတွက်ကွန်ရက်မရှိတာကြောင့်ဖောက်သည်တစ်ယောက်ဆုံးရှုံးသွားတာပဲ။
Himanshu Raj - ၁၉ နှစ်အရွယ်ဒစ်ဂျစ်တယ်လုပ်ငန်းရှင်
မတ်လ 15, 2021 မတ်လ 15, 2021 ဂျို	မှတ်ချက် Leave
အတွေးအခေါ်များအမြဲတမ်းအနိုင်ရသည်၊ အသက်သည်အရေအတွက်မျှသာဖြစ်ပြီးကြိုးစားအားထုတ်မှုသည်အောင်မြင်မှုဖြစ်စေသည်၊ ၎င်းသည်အိန္ဒိယ၏အပြောင်မြောက်ဆုံးနှင့်ငယ်ရွယ်သောစိတ်များအားသူတို့၏အလုပ်နှင့်ထုတ်ဖော်ပြသသောစကားစုအနည်းငယ်ဖြစ်သည်။
အတားအဆီးတွေကိုကျော်ပြီးကျော်လွှားပြီးရဲရင့်စွာနေထိုင်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်တဲ့အကြံဥာဏ်ရှိခြင်းတို့ကြောင့်အိန္ဒိယရဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအားလုံးဟာတိုင်းပြည်ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့် ဆို၍ ကမ္ဘာကြီးကိုငါတို့တတ်နိုင်သမျှကိုပြသသည်။ ဘယ်တော့မှနောက်သို့မဆင်းပါ၊ ဤဆောင်ပုဒ်သည်ဘဝပင်ဖြစ်သည်။
5 လှည့်ကွက် - Bihar ၏မာနသည်သူတို့၏အစွမ်းအစဖြင့်တက်လာသည်
မတ်လ 12, 2021 မတ်လ 12, 2021 Keshav ထာ	မှတ်ချက် Leave
၅ မှတ်သည်မည်သူဖြစ်သည်ကိုမသိသေးသောသူများအတွက်လျှင်မြန်စွာအလွန်လူကြိုက်များလာပြီးသင်လုံးဝရထိုက်သောကြောင့်သင်လုပ်ရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီကသူတို့၏သီချင်း TAURA နှင့်ပြန်လာခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့်သူတို့ကိုသင်မစစ်ဆေးမီသူတို့နှင့်ချစ်မြတ်နိုးခြင်းမပြုမီ၊ ၎င်းတို့နောက်ကွယ်ရှိလူများအကြောင်းနည်းနည်းပိုသိအောင်ပြုလုပ်ပါ။
အိန္ဒိယတွင်ထိပ်တန်း9အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်း Term အာမခံအစီအစဉ်များ
မတ်လ 12, 2021 မတ်လ 12, 2021 BimaKaro	မှတ်ချက် Leave
အွန်လိုင်းမှ Term Plan တစ်ခုကို ၀ ယ်ခြင်းသည်သင်သည်သင်၏အာမခံမှအများဆုံးတန်ဖိုးကိုရယူရန်ကြိုးစားနေပါကအထူးခြားဆုံးဖြစ်သည်။ သက်တမ်းအစီအစဉ်များသည်အသက်အာမခံ၏အခြေခံအကျဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ Term Insurance အစီအစဉ်များသည် Life Assured မှရွေးချယ်ထားသည့်အတိုင်းအချိန်ကာလတစ်ခုအထိအကျုံးဝင်သည်။ အကယ်၍ အသက်အာမခံသည်မူဝါဒကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားနေစဉ်အတွင်းပေါ်လစီသက်တမ်းအတွင်းသေဆုံးသွားပါကသေဆုံးသူအကျိုးခံစားခွင့်ကိုပေးချေရမည်။ အသုံးအနှုန်းအာမခံသည်အများဆုံးရရှိနိုင်သောအာမခံဖြစ်သည်
မတ်လ 3, 2021 မတ်လ 3, 2021 Keshav ထာ	မှတ်ချက် Leave
လူများစွာသည်တိကျမှန်ကန်မှု၊ အတွေ့အကြုံနှင့်သင့်လျော်သောနားလည်မှုမရှိကြသောကြောင့်ငယ်ရွယ်စဉ်ကအောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့ပါ။ သို့သော် Ahad Khaleeq သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူဟာအကောင်းဆုံးထဲကတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်။ ယခုအချိန်တွင်သူသည်အသက် ၁၆ နှစ်သာရှိသေးပြီးသူ၏ကျွမ်းကျင်မှု၊ အတွေ့အကြုံနှင့်ဗဟုသုတများဖြင့်ငွေအမြောက်အများရှာဖွေနေသည်။
ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ (WTO) ၏ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဖြစ်နိုင်ဂျီးရီးယားထိပ်တန်းစီးပွားရေးပညာရှင် Ngozi Okonjo-Iweala ကတနင်္လာနေ့တွင်ပြောကြားသည်မှာ၎င်းအဖွဲ့အစည်းသည်ယခုအချိန်ထိရှိပြီး၎င်း၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သကဲ့သို့တူညီစွာဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည် အကယ်၍ ၎င်းသည်နိုင်ငံတကာနှင့်သက်ဆိုင်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်လိုလျှင်ပြန်လည်ရလဒ်များကိုကမ်းလှမ်းပါ။
မတ်လ 2, 2021 မတ်လ 2, 2021 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
ယူအက်စ်အမျိုးသားအတုထောက်လှမ်းရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားလုံခြုံရေးကော်မရှင် (NSCAI) ကအကြံပြုသည် ကွန်ဂရက်ကလာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းတရုတ်ထက်ကျော်လွန်နိုင်ခြင်းမရှိစေရန်အတွက် chip ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသည်။ NSCAI သည်တရုတ်၏အဆင့်မြင့်ချစ်ပ်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ပစ္စည်းများ ၀ ယ်ခြင်းကိုကန့်သတ်ရန်အကြံပြုသည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မတ်လ 2, 2021 မတ်လ 2, 2021 GNAF	မှတ်ချက် Leave
ပထမဆုံးအိမ်တွင်းအထိန်းဖြစ်သည့် Chen သည်တုန်လှုပ်သွားသည်။ ထို့နောက်သူသည်ပီကင်းရှိဂုဏ်သိက္ခာရှိသောတက္ကသိုလ်တွင်တရုတ်စာပေကိုအထူးပြုခဲ့သည်။ သူမသည် Wechat အုပ်စုတွင်တရုတ်နှင့်အင်္ဂလိပ်စာနှစ်မျိုးလုံးသင်ကြားရန်အိမ်တွင်းကျူရှင်ဆရာတစ်ယောက်လိုအပ်နေသည့်စာကိုတွေ့ခဲ့သည်။ အိတ်ဆောင်ငွေရချင်တဲ့အတွက်သူမကစာချုပ်ချုပ်လိုက်တယ်။
မွေးစားခံရဖို့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာအကောင်းဆုံးဆံပင်အစားထိုးနည်းကဘာလဲ။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 28, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 27, 2021 Faraz Baig	မှတ်ချက် Leave
DHI သည်တိုက်ရိုက်ဆံပင်ပုံသွင်းခြင်းကိုဆိုလိုသည်၊ ဤနည်းလမ်းသည် FUE အစားထိုးကုသမှုပုံစံဖြစ်သည်။ DHI နည်းစနစ်တွင်, ဆံပင် follicles ကိုထုတ်ယူနှင့်ထည့်သွင်းရန်ကောင်းသောအစွန်အဖျားနှင့်အတူကလောင်ပုံစံ tool ကိုအသုံးပြုသည်။
DHI ဆံပင်အစားထိုးကုသမှုကုန်ကျငွေမှာဒေါ်လာ ၂၀၀၀ မှ ၁၅၀၀၀ ဖြစ်သည်။ ဤကုထုံး၏ကုန်ကျစရိတ်သည်အစားထိုးကုသမှုပြုလုပ်မည့်နေရာ၊ မြို့၊ ဆေးခန်း၊ ဆံပင်ကောက်ကောက်စုစုပေါင်းအရေအတွက်အပေါ်များစွာမူတည်သည်။ အာမခံကုမ္ပဏီများသည်ဤကုန်ကျစရိတ်များကိုမဖုံးလွှမ်းပါ။
အိန္ဒိယ Kurtis 'စတိုင်နှင့်အတူဝတ်ဆင်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 27, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 26, 2021 Danielle Voss	မှတ်ချက် Leave
Kurti သည်ယခု Desi ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ အိန္ဒိယကူတီကိုစတိုင်လ်ဖြင့် ၀ တ်ဆင်ရန်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ ကျနော်တို့နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အတူ updated နေဖို့ရှိသည်။ Kurti သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိဖက်ရှင်အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အများအားဖြင့်အမျိုးသမီးများသည် Kurti ကို ၀ တ်ဆင်သည်ထက်ယနေ့ခေတ်စတိုင်ကျသောအသွင်အပြင်ကိုပိုနှစ်သက်ကြသည်။
Kurti သည်အ ၀ တ်အစားများအားလုံးတွင်အဆင်ပြေဆုံးနှင့်ခေတ်မှီသည်။ Kurti ကိုတရားဝင်နှင့်ကျပန်းဝတ်စုံနှင့်ကျောင်းသားများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤဘလော့ဂ်တွင်သင်၏ Kurti နှင့်မည်သို့ပုံစံပြုနိုင်သည်ကိုသင့်အားအသိပေးလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Indian Kurti ကိုစတိုင်လ်နဲ့ ၀ တ်ဆင်ပါ။
Zila အနုပညာနောက်ကွယ်မှလူသား Mohd Daood Aslam မှထူးခြားသောဒီဂျစ်တယ်အနုပညာလက်ရာများ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 26, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 26, 2021 Keshav ထာ	မှတ်ချက် Leave
ဒီကမ္ဘာကြီးဟာတစ်ဟုန်ထိုးကြီးထွားလာနေပြီးလူတွေဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာကနေဒီဂျစ်တယ်ကမ္ဘာဆီကိုအမှန်တကယ်ရွေ့လျားနေပါတယ်။ ဤဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ဘဝ၌ရှိသောအနုပညာပုံစံများအပါအ ၀ င်ရှုထောင့်တိုင်းနီးပါးအပေါ်သို့သက်ရောက်သည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ပန်းချီကားတွေ၊ ပန်းချီကားတွေ၊ ပန်းချီကားတွေ၊ ဆီပန်းချီကားတွေကိုဒီနေ့အထိတန်ဖိုးထားကြပေမယ့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အနုပညာလက်ရာဟာထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအနုပညာလုပ်တဲ့လူတွေရဲ့အာရုံကိုဆွဲဆောင်နေတဲ့အရာထဲကတစ်ခုပါ။
မော်စကိုတွင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အဆိုးရွားဆုံးသောပြgridနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ လေယာဉ်မောင်းတာကအဖြေပါ ရုရှားက startup Hover ကဒါလုပ်နေတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, တရုတ်ပြည်မှ EHang ကုမ္ပဏီလည်းရှိသည်။ Hover startup သည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်နှင့်ပြissuesနာများစွာကိုဖြေရှင်းပေးသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ဒီဇင်ဘာလကလာမည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတွင်စီမံကိန်းကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၃၀ ဟုခန့်မှန်းခဲ့သည်။
ရုရှားနိုင်ငံက T-14 Armata တင့်ကားမီးသတ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည်တင့်ကားများသမိုင်းတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်စစ်သင်္ဘော၏ပစ်မှတ်များကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ထုတ်ဖော်ခြင်းစွမ်းရည်ကိုသဘောင်္များမပါ ၀ င်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်တင့်ကားသည်မောင်းသူမဲ့ယာဉ်အဖြစ်ကြီးမားသောစွမ်းရည်ကိုပြသသည်။
ယူအက်စ်ကယုံကြည်သည်မှာစီးပွားရေးအရစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထားသော်လည်းရုရှားသည်အမေရိကန်နှင့်ဥရောပတည်ရှိမှုကိုခြိမ်းခြောက်နေဆဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါကြေညာချက်ကိုယူအက်စ်ဥရောပစစ်ဌာနချုပ်အကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်ကြီး Tod D. Wolters ကပြောကြားခဲ့သည်။ လေတပ်အစည်းအရုံးဖိုရမ်မှာ။ ဖိုရမ်ကိုဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်မှဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်အထိကျင်းပပါမည်။
Mediaစတြေးလျမီဒီယာသို့ Facebook ကဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံချေးသည်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 25, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 25, 2021 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
Facebook ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၁ ဘီလျံမြှုပ်နှံမည်ဟုကတိပေးခဲ့သည် (ယူရို ၈၂၂ သန်း) သည်လာမည့်သုံးနှစ်တွင်သြစတြေးလျမီဒီယာလုပ်ငန်း၏သတင်းအကြောင်းအရာများဖြစ်သည်။ သြစတြေးလျမှသတင်းစာဆောင်းပါးများကိုပိတ်ဆို့ပြီးသည့်နောက်နည်းပညာကုမ္ပဏီများမှဒေသခံlocalစတြေးလျမီဒီယာကိုပေးဆောင်ရမည့်ဥပဒေကိုကန့်ကွက်သည့်အနေဖြင့် Facebook မှဝေဖန်မှုများကိုခံခဲ့ရသည်။
သြစတြေးလျပါလီမန်ကကြာသပတေးနေ့က Google နှင့် Facebook ကိုသြစတြေးလျမီဒီယာများအား၎င်းတို့၏သတင်းများကိုထုတ်လွှင့်ရန်အတွက်ပေးဆောင်ရန်တာဝန်ပေးခဲ့သည် ဤဥပဒေသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပထမဆုံးသောထိုကဲ့သို့သောဥပဒေဖြစ်သည်။ governmentစတြေးလျအစိုးရကမူထိုဥပဒေအား Facebook ကပိတ်ဆို့ပြီးတစ်ပတ်အကြာ (ဒီဇင်ဘာလတွင်စတင်ခဲ့သည်) အင်္ဂါနေ့တွင်ဥပဒေကြမ်းကိုအပြောင်းအလဲများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 25, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 24, 2021 Ujwal Sharma က	မှတ်ချက် Leave
ဒီနေ့မင်းတို့အကြောင်းပြောပြမယ် Gagan Arora သူသည်“ College romance”,“ Bagga” အမည်ရှိဝဘ်စီးရီးတွင်အကျော်ကြားဆုံးဇာတ်ကောင်တ ဦး ဖြစ်သည်။ ဒီဆောင်းပါးမှာမင်းရဲ့ခရီးစဉ်အကြောင်း၊ သူဘယ်လိုသရုပ်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့ပုံနဲ့နာမည်ကြီးပြီးကျော်ကြားတဲ့ Bagga ဇာတ်ကောင်ကိုသရုပ်ဆောင်ဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့တယ်။
Gagan Arora သည်အိန္ဒိယသရုပ်ဆောင်နှင့်သြဇာသက်ရောက်သူဖြစ်သည်။ သူသည်အိန္ဒိယလူငယ်များကြားတွင်အလွန်လူကြိုက်များသောကြောင့် Bagga သည်သူ၏ဝက်ဘ်စီးရီး College Romance တွင်လူကြိုက်များခဲ့ပြီးကျော်ကြားမှုများစွာရရှိခဲ့သည်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 25, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 25, 2021 Christina Kitova	2 မှတ်ချက်
ရုရှားနှင့်တရုတ်နိုင်ငံတို့သည်ပထမကမ္ဘာစစ်တည်ဆောက်ရန်သမိုင်းဝင်သဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ နှစ်နိုင်ငံသည်တရုတ်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလဖွဲ့စည်းပုံတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ပါလိမ့်မည်။ သတင်းအချက်အလက်များကိုရုရှားအစိုးရ၏တရားဝင်ဆိုဒ်တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အာကာသစခန်းကိုအမေရိကနှင့်ဒုတိယပြိုင်ပွဲ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်သည်။
ရုရှား - ၂၀၂၁ အမျိုးသမီးများအတွက်နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်လိမ့်မည်
ယခုနှစ်သည်ရုရှားရှိအမျိုးသမီးများအတွက်အဆိုးရွားဆုံးနှစ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည့်အခါအမျိုးသမီးများအတွက်ပိုဆိုးရနိုင်ဘူး အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကိုရုရှား၌ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခဲ့သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်ဇွန်လတွင်ဒဏ်ငွေသို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့်အပြစ်ပေးနိုင်သည်။ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကြောင့်ဒဏ်ငွေအများအပြားချမှတ်ခံရသည်။
Foxconn, EVs အပေါ် Fisker အဖွဲ့ Up ကို
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 24, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 24, 2021 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
ထိုင်ဝမ်မှ Hon Hai (Foxconn ဟုလည်းလူသိများ) နှင့်လျှပ်စစ်ကားထုတ်လုပ်သူ Fisker တို့သည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစာချွန်လွှာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ပါတီနှစ်ခုသည် Fisker တံဆိပ်အောက်တွင်လျှပ်စစ်ကားတစ်စီးတည်ဆောက်ရန်အတူတကွလုပ်ဆောင်ကြလိမ့်မည်, 2023 ၏စတုတ္ထသုံးလပတ်အတွင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက် - ထုတ်လုပ်ခံရဖို့မျှော်လင့်ထားသည့်။
Himachal Pradesh သို့သွားရန်လျှို့ဝှက်နေရာများ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 24, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 23, 2021 Rahul Arora	မှတ်ချက် Leave
ငြိမ်းချမ်းစွာထွက်ပြေးချင်ပါသလား ဝေးလံသောနတ်သမီးပုံပြင်ရှုခင်းများတွင်အတွေ့အကြုံသစ်ကိုသင်လိုချင်ပါသလား။ နေရာများ၊ လူနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများကိုသင်အမှန်တကယ်ရှာဖွေလိုပါသလား။ ဟုတ်ကဲ့လျှင်, Himachal အတွက်အောက်ပါ Offbeat ခရီးသွားနေရာများနှင့်သင်၏ wanderlust ကြွယ်ဝစေ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟိမချယ်ပရာဒေ့ရ်ှ၏ထူးခြားဆန်းပြားသောရှုခင်းများမှဤလျှို့ဝှက်ကျောက်မျက်များကိုရွေးချယ်ထားသည်။ ၀ ိညာဉ်ဖြင့် Offbeat တွင် Himachal ရှိ Offbeat နေရာများစာရင်းကို Shimla နှင့် Manali တို့မဖော်ပြပါ။ အမြားအပွားစကားများပြီးသားသူတို့ရဲ့အလှအပဝါကြွား!
ရုရှား - စမ်းသပ်စစ်ဆေးရန် New Gremlin Hypersonic ဒုံးကျည်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 23, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 23, 2021 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
ရုရှားက Gremlin (GZUR) လေကြောင်းပစ်လွှတ်နိုင်သည့်ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုအသစ်ကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင်စီစဉ်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ယခင်က - မွေးစား X-47M2 Dagger နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ထို့အပွငျ Gremlin ၏သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားကြောင့်, ၎င်းသည်လေးလံသောဗုံးကြဲလေယာဉ်များနှင့် MiG-31 ကြားဖြတ်အသုံးပြုသူများကိုအသုံးပြုခြင်းကိုကန့်သတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ.
အလီဘာဘာ - တရုတ်ပုရွက်ဆိတ်ထောင်ချောက်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 23, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 23, 2021 Samuel Gush	မှတ်ချက် Leave
မကြာသေးမီလများအတွင်းတရုတ်အာဏာပိုင်များသည်တိုင်းပြည်၏အကြီးဆုံး e-commerce B2 platform ဖြစ်သော Alibaba Group ကိုနှိမ်နင်းခဲ့သည်။ တည်ထောင်သူဂျက်မ၏တရုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားဖွယ်ကောင်းသောပြောဆိုမှုများသည်ဆိုးရွားသည့်စည်းမျဉ်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့်ကြီးထွားမှုကိုဟန့်တားစေသည်။
Jack Ma နှင့်တူသော Poor Kid သည်အိမ်ဖြစ်သည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဖေဖေါ်ဝါရီလ 23, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 22, 2021 GNAF	မှတ်ချက် Leave
Jack Ma နှင့်တူသောကလေးလေးသည်နောက်ဆုံးတွင်အိမ်ပြန်သွားသည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက်တွင် Fan Xiaoqin ၏ဖခင် Fan Jiafa ကသူ၏လေးနှစ်ကျော်ကျော်ကျော်ကြားမှုအပြီးတွင်သူ၏အငယ်ဆုံးသားသို့ပြန်လာလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ဆက်လက် 4th ဒေသခံတစ် ဦး မူလတန်းကျောင်းမှာတန်း။ Xiaoqin ကိုငှားရမ်းထားသူ Liu Changjiang သည်ယခုနှစ်အစောပိုင်းကစာချုပ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 22, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 22, 2021 Joyce Davis က	မှတ်ချက် Leave
HSBC Holdings က၎င်း၏ ၂၀၂၀ နှစ်ပတ်လည်ရလဒ်များကိုအင်္ဂါနေ့တွင်ကြေငြာမည်ဖြစ်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသိုက်အ ၀ န်းက၎င်း၏မဟာဗျူဟာပြန်လည်သုံးသပ်မှု၏ရလဒ်များကိုစိုးရိမ်သည်။ ဗြိတိသျှ Financial Times ဒီကိစ္စနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူတစ် ဦး က HSBC သည်၎င်း၏“ အာရှနှင့်မတူသောစီးပွားရေး” မဟာဗျူဟာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိလက်လီဘဏ်လုပ်ငန်းမှနုတ်ထွက်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
PSL 2021 Update - Real Thrill ကိုလေ့လာရန်အချိန်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 22, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 22, 2021 ရောဘတ်က Parker	မှတ်ချက် Leave
PSL သို့မဟုတ်ပါကစ္စတန်စူပါလိဂ်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ပါကစ္စတန်ခရစ်ကက်ဘုတ်အဖွဲ့မှဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ဒီလိဂ်ဟာကစားသမားတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေနဲ့သူတို့ကိုယ်သူတို့ထူထောင်နိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းများစွာဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ ကစားသမားအများစုသည်လည်းသူတို့ကိုသက်သေပြရန်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုရရှိလိမ့်မည်။ သင်အခွင့်အလမ်းရရှိလျှင်၎င်းကိုသင်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ရန်ကြိုးစားသင့်သည်။ ဒါဟာကံကောင်းသောလူသာဤလိဂ်အမျိုးအစားအတွက်အခွင့်အလမ်းရကြောင်းမြင်ကြခြင်းဖြစ်သည် သူတို့ဟာဘုံနှင့်သိသာထင်ရှားသည့်အခွင့်အလမ်းကိုလက်လွတ်မခံလိုကြပါ။
အမျိုးသားသူရဲကောင်းများကိုရှုတ်ချသည့်အတွက်တရုတ်အင်တာနက် Troll ကိုဖမ်းဆီးလိုက်သည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဖေဖေါ်ဝါရီလ 22, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 21, 2021 GNAF	မှတ်ချက် Leave
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်စပိန်ရက်ပ်ပါလိုဟာဆဲလ်ကိုထောင်ဒဏ်ချမှတ်ပြီးကတည်းကစပိန်နိုင်ငံတစ်လွှားတွင်ပြင်းထန်သောလမ်းပေါ်ဆန္ဒပြမှုများသည်စပိန်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းစပိန်အစိုးရမှပြဌာန်းထားသော Covid-16 ညမထွက်ရအမိန့်ကိုကြားနာခဲ့ရသည်။ သူ့အတွက်စပိန်တရားသူကြီးများကိုနာဇီများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ပြီးယခင်ဘုရင် Juan Carlos ကိုမာဖီးယားဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်ဟုခေါ်သည့်စာသားနှင့်တွစ်တာများ,” အခြားစွပ်စွဲချက်များအကြား, ပါပလောကိုးလထောင်ဒဏ်ခဲ့သည်။
Coronavirus - Sputnik V လူကြိုက်များမှု
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 20, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 20, 2021 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
Coronavirus ကူးစက်ရောဂါသည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိအဓိကသတင်းများ၏ရှေ့တန်းတွင်ဆက်လက်ရှိနေသည်။ လက်ရှိတွင်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုပေါင်း ၁၁၀ သန်းကျော်နှင့်သေဆုံးမှုပေါင်း ၂.၄ သန်းကျော်ရှိသည်။ ရုရှား Sputnik V ကာကွယ်ဆေးသည်လက်တင်အမေရိကတွင်အလွန်လူကြိုက်များလာပြီးကာကွယ်ဆေးလိုအပ်မှုမှာဆက်လက်မြင့်တက်နေသည်။
Media Pay ဘီလ်ဖြင့်သြစတြေးလျကို Facebook ကမိတ်ဆက်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 19, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 19, 2021 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မျှဝေခြင်းကို Facebook ကပိတ်ပင်ထားသည် တိုင်းပြည်အတွင်းအဆိုပြုထားသောဥပဒေကိုဆန့်ကျင်သြစတြေးလျအတွင်းရှိ၎င်း၏ပလက်ဖောင်းပေါ်မှသတင်း။ သြစတြေးလျားရှိပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုသောမီဒီယာနှင့်အသုံးပြုသူများကိုပါအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းမှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ခဲ့သည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က blog post တစ်ခု။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 17, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 17, 2021 Louis rolen	မှတ်ချက် Leave
ပါကစ္စတန်မှကျောင်းသားများသည် IELTS စာမေးပွဲတွင်ပါ ၀ င်ပြီးသူတို့၏တီးဝိုင်းရမှတ်ကိုသူတို့စာရင်းသွင်းလိုသောတက္ကသိုလ်သို့တင်ပြရန်လိုသည်။ သင်၏ပညာရေးအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုသည်မည်မျှပင်အရေးပါပါစေ၊ IELTS ရလဒ်မရရှိခြင်းသည်တက္ကသိုလ်မှသင့်ကို IELTS ကင်းလွတ်ခွင့်မပေးလျှင်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောမည်သည့်နိုင်ငံသို့မဆိုတက်ရောက်ခွင့်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
အိန္ဒိယနွေရာသီ - S&P မှစီးပွားရေးပြန်ကောင်းလာမည်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 16, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 16, 2021 Joyce Davis က	မှတ်ချက် Leave
၎င်း၏နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာတွင်, Standard & Poor's (S&P) ကလာမည့်နှစ်နှစ်အတွင်းအိန္ဒိယ၏စီးပွားရေးပြန်ကောင်းလာမည်ကိုမျှော်လင့်သည်။ ၎င်းသည်သူတို့၏ဘဝတွင်အနိမ့်ဆုံးအဆင့်တွင်လျှော့ချခြင်းနှင့်အလုပ်ပြုတ်ခြင်းများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ကြသောအိန္ဒိယပညာရှင်များအတွက်အဓိကသက်သာရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်ရှိစီးပွားရေးကျဆင်းမှုသည်အိန္ဒိယစီးပွားရေးကဏ္ sector တိုင်းကိုထိခိုက်ခဲ့သည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဖေဖေါ်ဝါရီလ 16, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 16, 2021 GNAF	မှတ်ချက် Leave
တရုတ်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်များမှဘွဲ့ရရှိပြီးနောက် ၆ လတွင် Na သည်အလုပ်မရသေးပါ။ တစ်ခါတလေစားပွဲထိုးမယ်တောင်စဉ်းစားမိတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ့မိသားစုကငါ့ကိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့ဂုဏ်သတင်းအတွက်အရှက်ကွဲခြင်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့်ဒီမှာ Xinjiang မှာအလုပ်ကောင်းကောင်းမရနိုင်ဘူး။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမရှိသောကြောင့်သူသည်ဒုတိယအကြိမ်ပြproblemနာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်နောက်နိုင်ငံတော်အဆင့် ၀ န်ဆောင်မှုစာမေးပွဲ (NCSE) တွင်လက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်။ သူသည်သင်တန်းတက်ရန်စာရင်းသွင်းသင့်သလား။
အမေဇုံအိန္ဒိယသည်မာရသီဘာသာစကားဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစတင်သည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဖေဖေါ်ဝါရီလ 15, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 15, 2021 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
အမေဇုံသည်မာလာတီဘာသာစကားဖြင့်ရောင်းသူမှတ်ပုံတင်ခြင်းစတင်ခဲ့သည်အိန္ဒိယ။ ၎င်းသည်ကုန်သည်များနှင့်ပြန်လည်ရောင်းချသူများအား Amazon ၏ကမ္ဘာ့စျေးကွက်သို့ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုမည့်စမ်းသပ်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အမေဇုံဝန်ဆောင်မှုများကိုမာရသီဘာသာစကားဖြင့်ယခုအမေဇုံအိန္ဒိယ Solutions ၏မှတ်ပုံတင်ထားသောအသင်းဝင်များသာရရှိနိုင်ပါသည်။
12... 31 ပို့စ်အဟောင်းများ